पहिलो पटक सपनाले मुख खोलिन,अर्को पटक बिबिसीमा तपाईहरुको नाम – Wow Sansar
पहिलो पटक सपनाले मुख खोलिन,अर्को पटक बिबिसीमा तपाईहरुको नाम
January 8, 2021 58
संसारकै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली चेली प्रकृति मल्ललाई सम्मान स्वरुप एक सेयर गर्न नभुल्नु होला । नौ वर्षमै प्रकृति मल्ल कक्षा ५ मा पढ्थिन्, त्यही कक्षामा छँदा मल्लको हातमा एउटा कापी पर्यो ! आफू पढ्ने विद्यालयकै माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु, अभिषेक लोप्चनको । कक्षाका अरु विद्यार्थीको तुलनामा छोरीको पनि हस्तलेखन अब्बल भएकोले बुवा प्रल्हादकुमारले लोप्चनको कापी प्रकृतिलाई देखाउनकै लागि घरमा ल्याएका थिए ।।
‘कापी हातमा पर्ने बित्तिक्कै म त एकछिन केही बोल्नै सकिन ।’ तीन वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झँदै १२ वर्षीया मल्लले भनिन्, ‘मैले कापी ओल्टाइपल्टाइ गरेँ, यस्तो अनविलिएवल (अविश्सनीय) अक्षर पनि लेख्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो ।’ त्यही ‘अनविलियवल’ अक्षर देखेर निक्कै उत्साहित भइन् उनी । ‘त्यही बेलादेखि म पनि ‘अनविलिएवल’ अक्षर लेख्छु भनेर लागेँ’, उनले त्यो बेला मनभित्रैबाट गरेको प्रतिवद्धता फुकाइन् ।।
त्यही प्र´तिवद्धताअनुसार उनले दैनिक अ´भ्यास गरिन् । भक्तपुरको सैनिक स्कुलको कक्षा ८ की छात्राको परिणाम निस्कियो, अक्षर हेरेर सबैबाट प्रतिक्रिया पाए, ‘अनविलिएबल ह्याण्डराइटिङ’ । कुनै टाइपिष्टले टाइप गरेको जस्तो, एकनासे अक्षरका दानाहरु, कुनै केरमेट नगरीएको सफा, हेर्दैमा चित्ताकर्षक, लोभलाग्दो अक्षर ! भ्यालीवाइड इन्टर स्कुल ह्याण्डराइटिङ कण्टेष्टमा उत्कृष्ट भएपछि उनको ह्याण्डराइटिङ सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बन्यो ।।
फेस´बुक र ट्´विटरमा छ्याप्छ्याप्ति भएको त्यो ह्याण्डराइटिङ हजारौंको संख्यामा शेयर भएको छ, लाखौं लाईक, कमेण्ट र ट्विट भएका छन् । उनको अक्षर देखेर सामाजिक सञ्जालमा कमेण्टहरु ‘छक्क’ परेका छन् । ‘वाह !’ भनेका धेरैको अर्को पनि प्रतिक्रिया छ, ‘गड गिफ्टेड ह्याण्डराइटिङ !’ कसरी सम्भव भयो ? आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी अर्थात् दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदै गए´पछि उनीप्रति धेरै शिक्षकहरुको ध्यान गयो ।।
शि`क्षकहरुले कक्षामै र स्कुलमै प्रकृतिको ह्याण्डराइटिङको खुलेरै प्रशंसा गर्न थाले । ‘कापी देख्ने बित्तिक्कै मैले पनि त्यो कापीको भन्दा राम्रो ह्याण्डराइटिङ लेख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर नियमित अभ्यास गरेँ । अक्षर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएँ । दिनकै म एकदुई पेज त ह्यान्डराइटिङ लेख्नतिर नै समय दिएँ ।’ उनले सफलताको रहस्य बताइन् । ‘मुख्य कुरा अ`भ्यास नै हो, अभ्यासले असम्भवलाई पनि स`म्भव बनाउँछ ।।´
अक्षर राम्रो बनाउन भि`त्रैदेखि लागेका उनलाई राम्रो ह्याण्डराइटिङ लेख्नु पनि एक प्रकारको सीप र कला हो भन्ने लाग्यो हो । त्यही कारण उनले राम्रा ह्याण्डराइटिङका न´मूनाहरु संकलन गरिन् । राम्रो अक्षर कसरी लेखिँदो रहेछ भनेर अक्षरमै घोत्लिइन् । ‘इन्टरनेटमा कुन अक्षरको सेप कस्तो ? हुने रहेछ भनेर आफै पनि खोज्न थालेँ ’ उनले भनिन्, ‘सँधै रुटिनै बनाएर ह्याण्डराइ`टिङ गरेँ ।।
राम्रो, आर्कषक अक्षर लेखिएको पढ्न पाए पा´ठकलाई मात्र नभएर लेख्नेलाई झन् भित्री मनदेखि आनन्द मिल्ने बताउने उनको हस्तलेखनलाई ‘क्यालिग्राफी’ ले अझ उत्कृष्ट अक्षर बनाउन सघाउ पुर् – यायो ।।
Prevटिकटकले गर्दा प्रेम गरेर ल्याएकी बूढ़ी टाप कसीन,बिदेश बाट आउँदा न श्रीमति न पैसा-भिडियो हेर्नुहोस
Nextघट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा सन्दिप, सर्वाधिक महंगो श्रेणीमा नाम
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना,हुँदा ५ विद्यार्थीको मृत्यु मनमा दया भए (RIP) लेख्नुहोला:, ’
२१ बर्षे परि जस्ती राम्री युवतीसंग ७० बर्षका कोपाको धुमधाम बिबाह ,सबै चकित (भिʼडियो सहित)
नेपालमै भेटियो सुन, चाँदी र मानव बस्तीझैँ देखिने तीन ठूला गुफा (तस्बिरसहित)
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6765)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3891)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3344)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1342)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1128)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1088)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1059)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1027)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (693)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (646)
पथलैया-अमलेखगञ्ज सडक खण्डबाट १ पुरुष’लाई बा’घले ता’नेर ल’ग्याे
१२ बजे राती किन खनियो चिहान अनि को हुन ६ बर्ष अघि बितेका ? सम्पुर्ण रहस्य र नालीबेली (भिडियो सहित)
१५ वर्षीया एलिशा ब्लड क्यान्सरसँग लड्दै : सहयोगकको याचना